(Xog): Dhibanayaal afka furtay kadib markii xayiraadda lagu soo rogo Websaytyadda Daahir Calasow. | Dadweyne – U Adeegaha Dadweynaha
Kadib, markii Wareegto ka soo baxday Xafiiska Xeer-ilaaliyaha Qaranka maalinti Isniinta ee la soo dhaafay lagu amray in la xayiro in ka badan 30 Wabsayt oo lagu eedeeyey inay warar been qoraan, ayaa waxa uu Weriye ka socda Wargeyska The Horn Observer Media la hadlay dhowr qof si uu u helo wax badan.
Yaasiin Maaxi oo ah Siyaasi Somali Swedish la xushmeeyo iyo Xubin ka tirsan Xisbiga Swedish Social Democratic Party ayaa waxa uu Dhibane u nqoday Websaytka Sunatimes ee uu Dahir Alasow leeyahay, kaasi oo bishii October 23-dii ee sannadkii 2013-kii ka qoray Warar been abuur ah.
Yaasiin Maaxi waxa kale oo uu Madax ka yahay Xisbiga The Somalia Social Unity Party, wuxuuna mar noqday Murashax Madaxweyne, isagoo sannadkii 2021-kii isku soo taagay Doorashadda Madaxtinimadad ee Somalia.
Yaasiin Maaxi waxa uu sheegay inay Dahir Alasow iyo Omar Faruk Osman ay isaga waceen ka hor intaysan wax soo daabicin, una sheegeen maadaama uu Maaxi yahay nin xushmad ku dhex leh Jaalliyadda Soomaalida Swedish inuu taageero Omar Faruk oo xilligaas sheeganayey inuu matalayo Shaqaalaha Soomaaliyeed.
Yaasiin Maaxi waxa uu u sheegay inuusan Omar Faruk haysanin Sharci xilka uu sheeganayo, kadib, markii uu Telefoonka kula hadlay Ururka Shaqaalaha Madaxa-bannaan iyo Saraakiisha Dowladda.
“Waxaan u sheegay inaan awoodin Taageeradda la iga codsaday iyo inaan diiday codsiyadooda” ayuu Yaasiin Maaxi ku sheegay Wareysiga lala yeeshay.
Waxa kaloo uu Wareysiga ku sheegay mar uu Telefoonka kula hadlay Dahir Alasow iyo Omar Faruk inay ku cabsi geliyeen Muuqaal qaldan.
Nasiib-xumo jawaabta uu helay Maaxi ayaa noqotay Maqaal been abuur ah oo ay ka qoreen, kuna eedeeyeen inuu yahay nin ka shaqeysta Is-xambaarka Tahriibayaasha.
“Maqaalka ay qoreen ayey Linkiskiisa si toos ah ugu direen Xisbigeyga iyo Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee dalka Sweden, waxayna shook iyo carro ka dhigeen Sharafteyda” ayuu yiri Mr. Maahi oo intaasi ku daray baaritaano la sameeyey inuu Garyaqaankiisa ogaaday in waxa uu Websaytkaasi daabacay ahayn kuwo xaqiiqo ah.
Inkasta oo Yaasiin Maaxi sameeyey wax saxsan, oo uu Boliska ku wargeliyey Kiiskaasi, kadibna buuxiyey Fayl Gal-dacwadeed ka dhan ah Daahir Alasoq iyo Omar Faruk, haddana iyaga kama joojin inay qoraan Maqaaalaadka been abuurka ah ilaa dhawaan oo ay soo daabaceen Maqaal kale oo ay Yaasiin Maaxi ku tilmaameen Dilaa.
“Raggaasi aad bay khatar u yihiin, waxayna isticmaalaan Farsamooyin kala duwan si ay dadka muhiimka u sumcad-xumeeyaan” ayuu Yaasiin Maaxi ku sheegay Wareysigiisa.
“Warbaahinta waxaa lagu yaqiinay inay ka shaqeeyaan Danaha Dadka, laakiin, marka ay ku shaqeynayaan mid ka duwan sidaasi, waxay ugu dambeyntii keenaysaa in Dhibanayaasha ay waxyeeleeyaan Warbaahinta noocaasi inay ugu dambeyntii Afka guraan oo hadlaan” ayuu sii raaciyey.
Mohamed Abukar Zubeer, Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Dastuurka, waxa kale uu yahay Macallin iyo Madixii hore ee Xiriirka Ururradda Shaqaalaha Soomaaliyeed (FESTU). Ka hor inta uusan ku soo biirin xilalka Dowladda waxa uu la wadaagay Khibradiisa Xagasha Qaldan ee Qas-wadayaasha Warbaahinta.
Mohamed Abukar Zubeer waxa uu sheegay inaysan Dahir Alasow iyo Omar Faruk qorin Been-abuurka oo keliya, balse waxay Websaytyadooda ku qoraan Maqaalaad cabsi-gelin nololeed, isla markaana ay isaga ku tilmaameen Argagixiso.
“Waxa la soo daabacay waxaa ku jiray Nuqlka Baasaboiorkayga, Sawirkayfa iyo Sawirradda Qoyskayga oo aan mar hore la wadaagay Omar Faruk” ayuu yiri Maxamed Abuukar Zubeer
Waxa uu intaasi ku daray inay Dahir Alasow iyo Omar Faruq isku hawlin oo keliya inay khatar geliyaan Noloshayda, balse waxay Qoyskayga Khatar ku geliyaan waxyaabaha khatarta ee ay soo daabaceen.
Sidoo kale, Warbaahinta The Horn Observer Media waxaa la hadlay Nin Akhiyaar ah oo u shaqeeya Dowladda Hoose ee magaalladda Muqdisho, kaasi oo codsaday inaan magaciisa la shaacinin.
Waxa uu sheegay inuu ka mid yahay dadka ay cabsida iyo bah-dilka ku sameeyeen Dahir Alasow iyo Wakiilkiisa u jooga Muqdisho oo ay Telefoonka isku dhaafsadeen Ololaha xun ee Warbaahinta ee weli socda, kana dhanka ah Duqii hore ee magaalladda Muqdisho.
“ Waxay ii sheegeen inay u shaqeeyaan Kooxda Kormeerka QM ee Somalia iyo Eritrea, waxayna igu cabsi-geliyeen inay Maqaal sawir qaldan ka daabici doonaan, haadii aanan iyaga siinin lacag dhan 2500 Dollar” ayuu Dhibanaha ku yiri Wareysiga, wuxuuna sii raaciyey: “Inkastoo aan hubo Sharaftayda, waa inaan bixiyo Lacagta ay iga codsadeen, si aan uga hortago qoraaladooda dhinaca gurracan ah” .
Dhibanaha waxa kale oo uu Wareysiga ku sheegay inuu ugu dambeyntii lacagtii 2500-Dollar u dhiibay Wakiilka Dahir Alasow u jooga magaalladda Muqdisho.
Dadka Soomaalida dhaqan ahaan ma jecla sawirka dhinaac qaldan iyo jidkan oo kale.
Si kastaba ha ahaatee, Wargeyska The Horn Observer Media waxa uu ku qiyaasay inuu Dahir Alasow qoraalladdiisa hanjabaadaha iyo been abuurka leh ku helo in ka badan 200,000 oo Dollar sannadkiiba.
Toddobaadyadii la soo dhaafay, Dahir Alasow waxa uu samaystay Cinwaano Twitter iyo Facebook oo been ah oo lagu soo dirayo Farriimo isaga lagu taageerayo, iyadoo dhinaca kalena iska dhigaya inuu taageero badan ka haysto Warbaahinta Isku-xirka Bulshadda (Social Media).
Cinwaankii ugu dambeeyey ee Twitterkiisa waxa baaritaanka Warbaahinta lagu ogaado in lagu isticmaalayo magaca Jeffrey Report waxaana la rumeysan yahay inay leeyihiin Dahir Alasow iyo kuwa ay wada shaqeystaan.
Xigasho: The Horn Observer.
Previous: Dowladda South Korea oo doonayso in xilliga loo kordhiyo Ciiddanka ka jooga Xeebaha Somalia.
Next: USA: Kenya Travel Warning